Android 7.0 Nougat dia ho tonga amin'ny Wiam 65 sy 65 Lite amin'ity telovolana voalohany | Vaovao momba ny gadget
Android 7.0 Nougat dia ho tonga ao amin'ny Wiam 65 sy 65 Lite amin'ity telovolana voalohany ity
Araka ny fantatrao tsara, ny orinasa Wolder dia miasa amin'ny demaokrasia teknolojia, fa tsy amin'ny resaka takelaka ihany. Tamin'ny famelabelarana farany navelanay anao tamin'ity LINK ity izahay dia afaka nahita andiana fitaovana vaovao amin'ny vidin'ny aretim-po izay mikendry ny hanavao ny faritra midadasika eny an-tsena. Ny iray amin'ireo fampanantenan'ny ekipan'i Wolder nandritra ny fampisehoana dia ny fanavaozana ny fitaovan'izy ireo amin'ny kinova Android farany amin'ny volana ho avy. Efa vita, Vao nanambara i Wolder fa ny maodely WIAM # 65 sy WIAM # 65 Lite dia havaozina amin'ny Android 7.0 Nougat.
Ireto ny vaovao mifandraika indrindra izay entina amin'ny Android manaraka:
Emojis bebe kokoa- Misy emoji isan-karazany maherin'ny 1.500 amin'ny Android ankehitriny, ao anatin'izany ny 72 vaovao
Fifehezana ny fametrahana haingana: Ny fikirana haingana dia manome anao fidirana mora amin'ny endri-javatra toy ny bluetooth, WiFi, ary ireo fiasa asongadina hafa. Azonao atao ny manaparitaka ny sarin'ireo fampiharana ary manova azy ireo araka izay itiavanao azy
Fanohanana maro an-toerana- Afaka manatsara ny atiny mifototra amin'ny fikirana eo an-toerana ny fampiharana. Raha miteny amin'ny fiteny samihafa ianao dia afaka mampiseho valiny amin'ny tsirairay amin'izy ireo ny motera fikarohana
Multi-varavarankely: Mandrosoa fampiharana roa mifanila. Ireo varavarankely dia azo ovaina amin'ny habeny amin'ny fanindriana ny divider
Batterie maranitra: Hofafana ny doze rehefa eo am-paosinao na any am-paosinao ny findainao smartphone isaky ny mandeha ianao. Izy io aza dia hahatonga ny baterinao haharitra somary lava kokoa raha ampitahaina amin'ny Marshmallow.
Santionany amin'ny vaovao fotsiny ireo, raha tianao ho fantatra hoe inona marina izy rehetra dia tsidiho ity LINK ity izay angoninay azy ireo.
Manararaotra mampahafantatra anao izahay fa azonao atao izany HERE miaraka amin'i Wolder's WIAM 65, fitaovana iray izay manodidina ny € 260 dia misy efijery FullHD 5,5-inch, miaraka amina fitadidiana fitahirizana 32GB ary tsy latsaky ny 3GB RAM. Raha tianao ny kinova kely nopotserina nefa misy chassis metaly sy solomaso misy rantsan-tànana dia manana ny WIAM # 65 Lite ianao amin'ny € 150 ETO.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Android 7.0 Nougat dia ho tonga ao amin'ny Wiam 65 sy 65 Lite amin'ity telovolana voalohany ity
Asus dia mandefa Tinker Board, ilay mpifaninana mivantana amin'ny Raspberry Pi
Windows 10 dia hikarakara ny fanadiovana ny rafitranao amin'ny famafana ireo rakitra izay tsy ampiasainao intsony